Socialbungy: Yako Peer-Ku-Peer Kushambadzira Platform | Martech Zone
Chero nguva apo mushambadzi mutsva paanosaina pane yedu saiti uye ivo vaine chikuva chekushambadzira, isu tinowanzo tora kudzika kwakadzika uye tinoita blog blog pamusoro pavo. YemagariroBungy munguva pfupi yapfuura kusaina kushambadza saka takavatarisa uye taida kugovana newe.
YemagariroBungy chiri kushambadza kwezviitiko uye tungamira kutora chishandiso yeiyo iPad (kana chero piritsi & PC) inoshandiswa kumhanyisa makwikwi, sweepstakes, uye mafomu ekusaina-kumusoro. Yakakwana kune-muchitoro kushambadzira, kiosks, zviitiko zvematumba, kana kunyangwe kunze mumunda. Ipa vanhu chikonzero chekushanyira yako yechiitiko dumba kana kiosk:
44% inoshanya nekuda kwekuwedzeredzwa kupihwa kana kukwidziridzwa.
32% inoshanyira kuti vaone ruzivo rwechigadzirwa.
13% inoshanya kuti vaone zvemukati zvinofambidzana.
11% inoshanya kuzoona kuratidzwa kwechigadzirwa.
Hapana budiriro inodiwa uye chikuva chinogona kugadziridzwa kune yako mhando, kusanganisira mifananidzo. Heano mamiriro ezvinhu ayo SocialBungy inonyanya kuiswa pakushandisa:
Chiitiko Matumba nemaKiosks - Chinja avo vashanyi vematumba, vashanyi pamusuwo, kana kusangana nekwako chiratidzo chaunosangana nacho muchiitiko chako nemakwikwi, kusaina-kumusoro fomu, kana chero kumwe kusimudzira.
Zvirongwa zveMabhizimisi - Ipa yako Trade Show dumba rekusimudzira kubva ku clipboards nemabhokisi erufu. Shandisa piritsi rako kana komputa kumhanyisa kukwidziridzwa kutora inotungamira yakananga kudumba rako.
Mu-Chitoro neRetail - Mhanya uchipinda mu-chitoro kukwidziridzwa kwaunogona kutora zvinotungamira uye kuzvishandura mudura chaimo.
Street Kukwidziridzwa - Shandisa iyo iPad kushandura kushamwaridzana kwevezera rako-kune-vezera rako kuita zvinooneka zvekutengesa zvinotungamira
Chinhu chinonyanya kufadza cheSocialBungy ndechekuti yakagadzirira kushandiswa kwechikwata. Tora kushandiswa analytics pamusoro pevashandi vako, tarisa maawa avo ega, uye wongorora huwandu hwezvinyorwa zvinounganidzwa imwe neimwe.
Tags: chiitiko dumbamuchitorokioskslead kubatwakunyoresachitoroKugonesa Kugonesaboka rekutengesamagarirochitorokukwidziridzwa mumigwagwapiritsikutengeserana show
7 Matanho eDhijitari Kushambadzira Nirvana
Kukadzi 5, 2014 na9: 01 PM
Kutenda nekugovana iyi info Douglas. Kutendeseka ini handina kujairika neSocialbungy asi ini ndichaongorora izvi munguva pfupi.
Kukadzi 6, 2014 na3: 38 PM
HI Barbara, ini ndiri muvambi pano paSocialBungy. Kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida kumhanya kuburikidza sununguka kunditumira email pa mbarwick@socialbungy.com